Wakaalada biyaha berbera waa xafiis 24-sacadood shaqeeya | CeelGardi News
Somaliland laga xusay maalinta nabada aduunka
Dawlada somàliland sheegtay in xanuunka covid 19 dib u soo noqday
Wasaarada arimaha dibada oo ka hadashay dorashada muqdisho
Daawo. Xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada oo ka hadlay liiska…
Guddomiyaha golaha wakiilada oo ka warbixiyay xeerarka golaha horyaal u baahan…
W/Q Cabdiqaadir Fartaag Gollaha Deegaanka waxa loo doorta inay ka…
Raysal wasaaraha somaliya ayaa xilki ka qaaday sarkiil sirdoonka Nisa
Home Articles Wakaalada biyaha berbera waa xafiis 24-sacadood shaqeeya
Qore: aqoonyahan Maxamed Saleebaan Yaasiin Deer
“Goor dhawayd baa gaadhi xamuul ahi uu qasabadii biyaha noo keenaysay naga jaray. Biyo la,aan lama jooji karo Berbera daqiiqadna Alle ha ka yeelee. Xiligaas baan isku sii daayey Wakaalada Biyaha Berbera Waxa aan aaminsanaa in aanay suurogal ba ahayn in xiligan aan ugu tagi karo shaqaale, sidoo kale in aanay suurtogal ahayn in waqtigan ay wakaaladu shaqaynayso. Balse waan isku sii daayey, maadaama aan hubay in barri aanan u helayn waqti aan ugu tago wakaaladda, sidoo kale aan la biyo la,aan karayn caawa iyo berritoona.
Nasiib wanaag waxa aan ugu tagay shaqaale heegan ah oo waqtigaas i soo raacay. Shaqaale gudanaya waajibaadkiisii shaqo. Ducaale Faarax, oo magaciisa iigu sheegay ninkaas shaqaalaha ahi markiiba soo raac iina xidh qasabadii go’day. Wax aan ugu mahadceliyo garan waayey aan ahayn, “Kumanaan mahadood korkaaga ha ahaato walaal.”
Sida xaqiiqdu ay tahay, goob shaqo ay taalo kama soo hadho masuulka u sarreeyaa siduu shaqada iyo shaqaalaha u qorsheeyo Dawlad Abdi Looliye una abaabulo. Waan sababta aan halkan sida weyn aan ugu bogaadinayo Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Berbera.
Waana sida ay bulshadu uga baahantahay masuuliyiinta madaxda ka ah goobaha bixiya adeega bulshadu inay tusaale wanaagsan oo ku-dayasho mudan ay ka dhigtaan maareeyaha wakaaladda biyaha Berbera.
Previous articleMadaxwayne ku xigeenka somaliland kormeeray Xarunta Damdamiska hargeysa
Next articleGuddomiyaha xisbiga wadani gobolka saaxil oo xildhibaanada cusub wakiilada fariin u diray
Daawo. Xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada oo ka hadlay liiska...
Guddomiyaha golaha wakiilada oo ka warbixiyay xeerarka golaha horyaal u baahan...
Dawlada suudan oo ka badbaaday afgani
Wakiilka dawladda Ingiriiska ee Somaliland Mr Stuart Brown oo kulan gaar...
Liiska musharaxiinta aqalka sare somaliya raysal wasaaraha rooble gudomay
20 xildhibaan mooshin ka keenay haayada caymiska golaha wakiilada
Xildhibaan maxed abiib oo dhaliulo y jeediyay gole wakiida ka tirsan...
Fahad yasin oo saaka muqdisho ka degay
Dahab shiil group jaamacada hargeysa u dhisay laab uu ku baxay...
Daawo. Afhayeenka saladiinta somaliland sheegay in dhulki somaliland lagu soo duulay
Kulankii ay yeesheen guddida dhaqaalaha ee golaha wakiillada iyo Guddoomiyaha caymiska...
Gudida fulinta xisbiga ucid oo shaaciyay waxkhiga la qabanayo shirka golaha...